Ciidamada Galmudug iyo Maleeshiyaad isbaaro dhigtay oo ku dagaalamay Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Galmudug iyo Maleeshiyaad isbaaro dhigtay oo ku dagaalamay Galgaduud
Wararka inaga soo gaaraya deegaanka Godinlabe oo ka tirsan Gobolka Galgaduud, ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Maamulka Galmudug iyo Maleeshiyo hubaysan.
Dagaalkaan ayaa yimid, kadib markii ciidamada Maamulka Galmudug ay weerar ku qaadeen Maleeshiyo hubaysan oo Isbaaro dhigtay duleedka Godinlabe.
Gaadiidleyda halkaasi istcimaasha ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ka cabanayeen jidgooyada Maleeshiyadaasi hubaysan ay dhigteen, balse saaka ayaa waxaa halkaasi ku baxay ciidamada Galmudug.
Maleeshiyaadka hubaysan ayaa isku dayay inay sameeyaan iska caabin ku aadan inay la dagaalamaan ciidamada Galmudug, hayeeshe dagaalka ayaa looga itaal roonaday sida wararka sheegayaan.
Khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkaasi, laakiin ma cadda inta uu la eeg yahay Khasaaraha dagaalka ka dhashay.
Saraakiisha Maamulka Galmudug oo Dhacdo.com ay la xiriirtay ayaa sheegay inay ku guda jiraan howlgalka lagula dagaalamayo Burcada, Saxaafaddana ay faah-faahin ka siin doonaan.
Halkii ay isbaarada dhigteen Kooxihii Burcada ahaa ayaa hada waxaa ku sugan ciidamada Maamulka Galmudug oo la wareegay.
Maamulka Shabeelaha Dhexe iyo AMISOM oo ka wada hadlay amaanka